CFM : “Mba hiteraka lonilony ny fifidianana” | NewsMada
CFM : “Mba hiteraka lonilony ny fifidianana”
“Mba samy ho tony izany isika miandry ny famoahan’ny fitsarana mahefa ny voka-pifidianana ofisialy. Ao antin’ny fitoniana sy fihavanana no iandrasantsika ny voka-pifidianana, na ny vonjimaika havoakan’ny Ceni na ny ofisialy havoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana.”
Io no nambaran’ny filoha mpisolo toerana eo anivon’ny Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), i Jean, taorian’ny fanombohan’ny fivoriana ara-potoana fahefatry ny CFM, teny Ampefiloha, omaly. Mba ho anatin’ny fitoniana sy manara-dalàna ny fifidianana.
“Misoroka mba tsy hisian’ny lonilony avy amin’ny fifidianana isika”, hoy izy. Izay no anisan’ny nametrahana ny CFM noho ny lonilony napetraky ny tantara sy ny raharaha politika. Rehefa tonga ny fifidianana, misoroka izay lonilony izay ny CFM miaraka amin’ireo komity mpiara-miombon’antoka. Misy ny andraikitry ny CFM manokana: ahoana no hisian’ny fifidianana anaty fihavanana?
Ny fihavanana no mitoetra
“Ahoana no hisian’ny fifidianana ao anatin’ny fihavanana?”, hoy ihany izy. Satria mandalo ny fifidianana fa ny fihavanana no mitoetra. Saika olona mpihavana sy mifanolobodirindrina avokoa ny kandidà na ny mpanohana azy, ka tsy hiteraka fisaraham-bazana vaovao. Takin’ny tany demokratika sy tan-dalàna ny fifidianana, tsy azo ialana: ahoana no hahatonga izany tsy hiteraka romoromo sy fisaraham-bazana amintsika, fa ho toy ny ataon’ny firenena maro efa mandroso?